Nagu Saabsan - Warshadda Mashiinka Qalabka Burushka
Qalabka Burushka MEIXIN
Meixin Comb Burush Machine Manufacturer, Shirkadeena waa shirkad farsamo oo sareysa oo la aasaasay 2004.We ku takhasusay cilmi baarista, horumarka iyo soo saarista 2-5 axis single (double) mashiinka qoditaanka burushka, mashiinka qashin qubka CNC iyo mashiinka tuubada, CNC Mashiinka buraashka ee mashiinka lagu ruugo, mashiinka cadayga, mashiinka goynta, mashiinka goynta iyo mashiinka goynta, iwm. Waxyaabahayaga ayaa si balaadhan loogu dabaqayaa burush maalin kasta, burush cadayga korantada, cadayga safarka, qurxinta, cadayga, cadayga cadayga, timaha timaha wareega, timaha timaha wareega, burushka timaha, burushka timaha, burush timaha, nadiifinta taxanaha korantada. warshadaha wax soo saarka burushka iwm. Waxaan ku sameyn karnaa mashiinka iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Waxaan heysanaa koox xirfad iyo khibrad u leh horumarinta farsamada.
Waxay diyaar u yihiin qaabeynta iyo soosaarida alaabada leh qaababka caadiga ah iyo tafaasiisha.
Wax soo saarka Burushka iyo Qalabka Broom
Mashiinka cadayga ee ay sameyso MEIXIN soosaarida PZ-22
Macaamiisheennu waxay ka yimaadeen adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan Hindiya, Fiyatnaamiis, Venezuela, deegaanka Taiwan, Koonfurta Ameerika iyo wixii la mid ah. Intii lagu gudajiray sannadihii la soo dhaafay, mudnaanteenna koowaad ee 1 ayaa had iyo jeer ahayd adeegga macaamiisha iyo macaamiisha qanacsanaanta.Waxaan wax badan ka qabanay si aan sare ugu qaadno heerarka tayada oo aan ku dadaalno sidii aan u dhisi lahayn maamul tayo leh oo tayo leh iyo dammaanad qaad.
Qalabka burushka suuliga hockey waxaa sameeyay MEIXIN soosaarida PZ-16
Badeecadeenu waxay daboolaan cabirro kala duwan oo mashiinno ah wayna caan ku yihiin macaamiisha leh shaashadda kumbuyuutarka, kubbadda saxda ah ee loo soo diray ee TBI tareemada toosan iyo tareenka toosan ee tareenka, servo motor, Talyaani brake motor iyo wixii la mid ah Alaabadayada oo dhan waa in la tijaabiyaa 100% si loo hubiyo shaqeynta, isku halaynta, amniga iyo cimri dherer inta aan la dhoofin.
Mashiinka samaynta balaastikada oo furan
Bilowgii 2017, amarkii ugu horreeyay ee mashiinka burushka ee macaamiishayada Pakistan ayaa si guul leh loogu xirxiray. Waxay ku socotaa gaadiidka. Xirmadan waa mid adag sida sawirada soo socda ay muujinayaan inay ballan qaadayaan badbaadada mashiinnada.
Wax soo saarkii Meixin ee ku takhasustay mashiinka cadayga, waad na aaminaysaa, waan kuu adeegaynaa.